umshini wokubumba wamabele weKenya,shayela ngenjini kaphethiloli noma udizili
Ngo-Ephreli 2019, enye yamakhasimende ethu aseKenya ayalile 2 isetha umshini we-corn peeler thresher .Ngokwezidingo zakhe ,simatanisa nenjini kaphethiloli nenjini ye-dizili kuye. ufuna ukuhlolwa lo mshini wommbila futhi uzonquma i-oda lakhe lesikhathi esizayo .athi ummbila uyisilimo esidingekayo sokudla okusanhlamvu e-Afrika ,ufuna ukuthengisa lo mshini we-corn peeler kanye nomshini wokugaya eKenya nakwamanye amazwe angomakhelwane .kuyi-imeyili yakhe wethule izinto eziningi zommbila e-Afrika .
Ummbila yisitshalo sikakolweni esibaluleke kakhulu esidotshwe kabanzi emasimini ase-Afrika. Kukhiqizwa ummbila minyaka yonke kunanoma yikuphi okunye okusanhlamvu. kukhona cishe 50 uhlobo lommbila emhlabeni,anemibala ehlukene, ukwakheka nobujamo bezinhlamvu nosayizi. kepha ummbila omhlophe ophuzi yizo izinhlobo ezivame kakhulu. Izinhlobo ezimhlophe nezphuzi zikhethwa ngabantu base-Afrika.Corn acebile ngamavithamini A, C no-E, carbohydrate, namaminerali abalulekile, futhi uqukethe 9% amaprotheni. Zinothile ngembobo yokudla kanye nama-kilojoule angumthombo omuhle wamandla kuma-Afrika.Zonke izingxenye zommbila zingasetshenziselwa ukudla nemikhiqizo okungeyona eyokudla.I-kernel yommbila ingasetshenziselwa ukudla kwabantu nesigaxa sommbila ,iqabunga lingasetshenziswa ekudleni kwemfuyo.
E-Afrika ,abanye abantu badla ukudla okwenziwe ngokhuni kathathu ngosuku.Nxa usudla isidlo sasekuseni, isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa e-Afrika, kukhona indishi yokudla okuhambisana nayo, noma yakha ingxenye eyinhloko yalo.ukudla kwesidlo sakusihlwa kunegama elihlukile nezindlela ezihlukile zokupheka emazweni amaningi ase-Afrika .
Kuya ngokuthi ukuphi ,ungabiza ukudla kommbila ngegama elihlukile e-Afrika.Zambia ,babeyibiza nge-Sadza.I-Ghana abantu babeyibiza nge-Banku noma i-Kenkey.Ugali noma i-fufu igama elijwayelekile lokudla kommbila empumalanga ye-Afrika ,njenge Mali,Ukuhamba,IBenin njll .Nigeria wayibiza nge-Ogi noma i-Akamu. ungathenga ukudla okuphelele kommbila kulawa mazwe amaningi ase-Afrika ukwenza ukudla okumbila.Nezindlela eziyikhulu zokudla kokudla kommbila e-Afrika.
Ukusetshenziswa komshini we-corn peeler thresher
Akunandaba ukuthi ungapheka kanjani ummbila ezweni lase-Afrika ,badinga i-peel kanye nokubhula kern kernel kusuka ku-cob.our Kenya ikhasimende lisitshele ukuthi bawenza ngesandla lo msebenzi ngaphambili,ayisebenzi kuphela imishini yokusebenza kodwa futhi ichitha isikhathi. Umlimi omkhulu uchitha isikhathi eside kuleli pulazi esebenza ngalo. ufuna ukusebenzisa umshini ukuxazulula le nkinga.usithola ku-inthanethi ,ngemuva kokuxhumana nge-imeyili kanye nokushaya ucingo ,unquma ukuthenga 2 isetha umshini we-corn peeler seller for Kenya.we uzothumela lokho 2 ibeka imishini yokubhula yamachweba ethekwini laseMombasa,Kenya . uzothatha umshini lapho .Kasijabule kakhulu ukunikeza umshini we-corn peeler thresher womlimi waseKenya. Umshini wokusabalalisa ummbila we-corn ukusindisa umlimi wase-Afrika epulazini elisindayo.